Fitsangatsanganana Fitness " Journey-Assist- Fitness Fitness
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Fitness fitsangantsanganana
Ny fizahan-tany Fitness dia karazana fizahan-tany vaovao. Ao anatin'ny sehatry ny fitsangatsanganana toy izany, fialamboly amin'ny moron-dranomasina, mitambatra ny fitsangatsanganana amin'ireo toerana mahaliana, ny fiofanana ary ireo hetsika misy lohahevitra samihafa. Matetika fitsangatsanganana an-tarika ireo; ny vondrona iray dia misy mpandray anjara 15-20, izay misy mpampiofana efa za-draharaha (na vondron'ireo mpampiofana) sy ireo manampahaizana manokana miasa: mpahay sakafo, psikology, dokotera fanatanjahantena. Ny fitsangatsanganana ara-batana dia miavaka amin'ny dia fitsangatsanganana mahazatra izay mifantoka amin'ny fivoarana ara-batana (ara-panahy) fa tsy ny fitsidihana ny toerana mahaliana sy ny hakamoana.
Inona no fitsangatsanganana fahasalamana.
Ny votoatin'ny fitsangatsanganana toy izany.
Sakafo ara-pahasalamana amin'ny fitsangantsanganana ara-pahasalamana.
Fifandraisana amin'ny olona mitovy hevitra.
Fampiononana sy fiarovana.
Inona no tokony ho entinao miaraka amin'ny fitsangatsanganana ara-pahasalamana.
Inona no fitsangatsanganana fahasalamana
Ny fitsangatsanganana ara-pahasalamana dia tsy mifatotra amin'ny fotoanan'ny fialan-tsasatra. Mazava ho azy fa mandany akaikin'ny ranomasina ny ankamaroan'izy ireo, fa ao anatin'ny ririnina dia mankany an-tendrombohitra no handaminana. Manolotena mitambatra fitsangantsanganana mitambatra sy tery mifantoka.
Miompana tampoka ny kilasy amin'ny lafiny iray. Ohatra, mety ho ilay fandalinana dihy iray manokana.
Ny programa fandaharana fitsangantsanganana mitambatra dia lehibe kokoa ary manankarena kokoa. Ao anatin'ny rafi-pandrafetana dia afaka miditra amin'ny karazam-pahasalamana ianao, ohatra, manitatra, Pilates, aerobika, jogging, sns.
Ny sasany amin'ireo fitsangantsanganana ara-pahasalamana ho an'ny vidiny dia toa lafo dia lafo. Na izany aza, rehefa mampitaha ny programa sy ny tombontsoan'ny fitsidihana toy izany miaraka amin'ny vidiny, azonao atao ny manamarina fa voamarina ny vidiny. Ny sakafo, ny fampiofanana, ny fandrahoan-tsakafo, ny trano fandraisam-bahiny, ny mpampianatra, ny fanomezana sy ny zavatra maro hafa mahafinaritra sy mahasoa dia matetika no tafiditra amin'ny vidin'ny dia.
RAHA MISY TOKOA
Ny votoatin'ny fitsangatsaram-batana
Ny mpandray anjara amin'ny fizahan-tany dia mety ho olona mitady hanitatra ny faran'ny fahatsiarovany tena ary hahafantatra olona hafa izay akaiky azy am-panahy. Ny programa dia zarazaraina amin'ny fahasarotana, noho izany antony izany dia mahomby ny fampiofanana ara-batana. Rehefa dinihina tokoa, ny tsirairay dia mahazo ny haavon'ny entana: mpanao fanatanjahan-tena za-draharaha - kofehy mafy, vao manomboka - ohatra, ny yoga.
Raha ny fitsipika, ny mpizahatany manao fanatanjahan-tena dia olona matotra kokoa na latsaka (28 taona). Na izany aza, misy ihany koa ny orinasa tanora feno 20-25 taona. Azonao atao ny mitondra ny zanakao, avy eo ny mpitantana ny fizahan-tany dia hikarakara azy ireo mandritra ny fampianarana.
Mahazo fahaiza-manao vaovao ny mpandray anjara, mampitombo ny heriny, ny fiaretana.
Na izany aza, ny fitsangantsanganana toy izany dia midika ihany koa ny fetran'ny fahasalamana. Rehefa dinihina tokoa, ohatra, ny karazana fanatanjahan-tena sasany dia ilaina amin'ny aretina maromaro amin'ny lamosina sy taova anatiny. Raha sendra radikulitis na mihombo ny aretina mitaiza dia tokony hanaiky aloha ny drafitra fitsidihanao dokotera.
Fandaharam-pizahan-tena amin'ny alàlan'ny famaritana dia misy fiofanana. Ity dia mety ho jogging, manja, marefo vatana, yoga sy safidy maro hafa, ao anatin'izany ny mandihy go-go na volley ball sy ny baolina kitra. Ho an'ny fitsangatsanganana fitaizam-batana, voafidy ny toerana eksotil manana endrika mahaliana. Izany dia ahafahana mitondra kilasy maraina amin'ny morontsiraka amoron-dranomasina na amin'ny misasakalina amin'ny alina amin'ny farafahakeliny. Ny safidy hafa amin'ny fanazarana kardio nentim-paharazana dia ny fiakarana amin'ny tampon'ny tendrombohitra iray, fa raha tokony haka fialan-tsasatra passive ianao dia afaka misaintsaina. Ny fiofanana dia amboarina, omena ny entam-panafihana ho an'ny vondrona hozatra rehetra, mifantina amin'ny asa sy fitsaharana.
Sakafo ara-tsakafo mandritra ny fitsangatsanganana ara-batana
Maro amin'ireo mpizahatany ara-batana no mandray anjara amin'ny fitsangatsanganana toy izany noho ny fihenan'ny lanjany. Na izany aza, ny fahaverezan'ny lanjany na ny fanatsarana ny fitaizam-batana dia mety hitranga raha tsy misy sakafo voalanjalanja. Noho io antony io, matetika ny mpitsabo otrikaina dia miasa ao amin'ny vondrona tokan-tena. Fantany tsara hoe inona no zavatra manafoana ny faniriana hihinana zava-mamy, ary mampitombo ny vatana. Ny fandaharan'asa mampihena lanja samihafa dia azo ampiasaina, raha ny mpanjifa tsirairay kosa dia atolotra iray izay zatra manokana amin'ny zava-misy azy.
Noho ny be dia be ny legioma, legioma sy voankazo, ny vatana dia mandray ny vitamina ilaina rehetra, angovo handray anjara amin'ny fampiofanana, ny saturation dia tanteraka tsy misy fanina.
Fifandraisana amin'ny olona mitovy hevitra
Mora kokoa ny manatratra ny tanjonao raha misy olona eo akaiky eo izay manana finoana sy fanohanana mitovy amin'izany amin'ny toe-javatra sarotra. Ny fitsangatsanganana ara-batana dia mety amin'ny famoronana faribolana olona mitovy fisainana aminy. Amin'ny tontolo tsy mahazatra, amin'ny firenena hafa, miaraka amin'ny soatoavina iraisana, dia noforonina ny fepetra hanakalozana ny eritreriny sy ny zavatra niainany.
Ny fandaharam-pizahan-tena momba ny fizahan-tena dia manome fotoana hifandraisana. Ohatra, ny hariva eo akaikin'ny bonfires na ny sakafo hariva ao amin'ny trano fisotroana tsara, ny fety divay, ny fihaonana miaraka amin'ny lalao azo atao. Ny fifandraisana tsy manelingelina dia mitarika ho amin'ny fiforonan'ny mpivady, maro no mamorona fisakaizana mandritra ny taona maro.
Fampiononana sy fiarovana
Mba handao ny faritra mampionona dia tsy ilaina mandeha any anaty lava-bato intsony ka matory eo ambony harambato. Ampy fotsiny ny hidirany any amin'ny tontolo tsy mahazatra amin'ny alàlan'ny entana mora, fa mavesatra tokoa.
Misaotra ny rafitra tafiditra rehetra, afaka mifantoka amin'ny tanjonao ianao nefa tsy variana amin'ny zavatra kely. Ireo mpandray anjara amin'ilay fitsangatsanganana ara-batana dia omena fivoriana, hipetrahana ao amin'ny efitrano ahazoana aina ary sakafo mahavelona. Ny fanontaniana rehetra mipoitra mandritra ny ambiny dia antsoin'ny mpitantana.
Ny saina marobe dia voaro amin'ny fiarovana, noho io antony io, ny ankamaroan'ny firenena fivahinianana dia nofidina ho fitsangatsanganana ara-pahasalamana, izay misy rivo-piainana ary finaritra be amin'ireo mpizahatany vahiny. Tsy tokony ho mpiremby manodidina ilay trano fandraisam-bahiny. Ny fotodrafitrasa fitsaboana tsara dia zava-dehibe. Ny mpandray anjara amin'ny fizahantany dia omena antoka hitranga amin'ny lozam-pifamoivoizana.
Inona no tokony ho entina
Io olana io dia fanapahan-kevitry ny mpikarakara ny fitsangantsanganana ara-pahasalamana, izay afaka manome soso-kevitra ny zavatra horaisinao, nomena ny torolàlana momba ny fizahantany, vanim-potoana, firenena. Na izany aza, na ahoana na ahoana, tokony tokony:
Fanatanjahan-tena (andiany maromaro).
Kiraro fanatanjahantena (tsiroaroa maromaro).
Mat ho amin'ny fanatanjahantena.
Ho an'ireo tia ny fanaraha-maso fampisehoana, misy ny maoderina Fitness tracker (hetsika mpanara-maso), izay handamina ny isan'ireo dingana, firy kaloria doro, kalitao matory ary manome fampahalalana hafa ilaina.
Ny fitsangatsanganana ara-pahasalamana dia atao any ivelany sy any amin'ny fireneny. Noho izany dia tsy mifamatotra amin'ny vanim-potoana ny fizahan-tany toy izany. Ho toy ny fitsipika, toerana izay nofidian'ny toetr'andro milamina (amoron-dranomasina, ala, sns). Ny antony dia ny rivotra madio sy ny tara-pahazavana dia mandray anjara amin'ny hetsika ara-batana, mampitombo ny tahan'ny metabolika ary manamafy ny hery fiarovana. Noho izany antony izany, ny fiofanana dia tanterahina amin'ny rivotra vaovao, izay mitondra tombony lehibe indrindra. Ny tombony amin'ny fizahan-tena ara-pahasalamana dia ahitana ny fisianana ny fiakarana an-tendrombohitra, ny fandehanana any anaty ala ary ny fijerena ny ranomasina dia lasa mpisolo toerana fanazaran-tena mahazatra.
Ny firenena tena malaza amin'ny fitsangatsanganana fitsidihana dia Таиланд, Ejipta, India, Gresy. Na izany aza, azo atao ny mandamina ho an'ny tenanao amin'ny fitsangatsanganana fiadanam-batana kely amin'ny faran'ny herinandro ary tsy lavitra ny tranonao, ohatra, amin'ny toerana misy ny toby misy tanàna na ala.
Ny fitsangatsanganana ara-pahasalamana koa dia atao any amin'ireo firenena tandrefana. Eoropa... Mandritra izany fotoana izany dia afaka manofa villa ianao ary mifehy tsy miankina ny fizotrany 100%, tsy misy "inclusif" rehetra: mividiana sakafo manokana, mahandro sakafo, mandamina fotoana fialam-boly. Mbola mahaliana kokoa aza.
Ny fitsangatsanganana fitaizam-batana dia mety ho an'ny olona rehetra izay te hanatsara ny fahasalamany ara-batana, ary koa ny hahafantatra tsara ny tenany, dia manaova namana vaovao, olona mitovy saina, ary handany ny fotoanany fialan-tsasatra any amin'ny firenena mahafinaritra. Mandritra izany fotoana izany, ny sakafo mety (nefa matsiro) koa, ny fiofanana be dia be ary ny fandraisana fampahalalana vaovao vaovao mahasoa amin'ny vatan'ny olona iray sy ny sainy dia omena. Feno angovo, azo inoana fa hiverina olona hafa ianao na mahatsapa ny nofinao taloha.